Achawlaymyar, Author at Achawlaymyar - Page 456 of 488
ညီမလေး ဇာခြည်မြင့်မြတ်ဆုံးသွားတာ မယုံနိုင်စွာနဲ့လွမ်းစွတ်တမ်းတ ရေးသားထားတဲ့စာတစ်စောင်/
ယုံလဲမယုံဖူး..ဘယ်လိုမှလဲ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး.. မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ…😔 အရမ်းလဲလွမ်းနေတယ်နော်..ဘယ်လိုမှ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး….. ယုံလဲမယုံဖူး…ညီမလေးနဲ့ တူတူနေမယ်ဆို…စားချင်တာလဲ ချက်ကျွေးမယ်ဆို မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေလဲ လိုက်ပို့ ပေးမယ်ဆို…😭 မရီး အမေကို ဂရုစိုက်ပေးဆို….နောက်လဲ ဘယ်သွားသွား တူတူသွားကြမယ်ဆို…အခုတော့ ဘာဖြစ်လို့ထားသွားတာလဲ….😭😭😭 အဲ့လိုမှန်းသိရင် ညီမလေး လဲ လိုက်ခဲ့ ပါတယ်….😭😭😭 အခုတော့…….. 😔 မကြီး…အဆင်ပြေအောင်နေနော်… ညီမလေးတို့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့..မကြီးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်ပေးမယ်နော်….. အေးချမ်းစွာ….အနားယူပါနော်…မရီး😔 27.6.2020💔😔😭 / Su Nandar Kyaw unicode ယုံလဲမယုံဖူး..ဘယျလိုမှလဲ ဖွသေိမျ့လို့မရဖူး.. မကွီးရေ အမှတျတရ memory လေးပွနျတတျလာအောငျလို့ပါ မကွီးရေ အမှတျတရ memory လေးပွနျတတျလာအောငျလို့ပါ…😔 အရမျးလဲလှမျးနတေယျနျော..ဘယျလိုမှ ဖွသေိမျ့လို့မရဖူး….. ယုံလဲမယုံဖူး…ညီမလေးနဲ့ တူတူနမေယျဆို…စားခငျြတာလဲ … Read more
မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် သိပ်ကို သတ္တိရှိကြပါတယ်…..
သတ္တိရှိတဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် သိပ်ကို သတ္တိရှိကြပါတယ်….. ဒီပုံလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်က fb ပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပုံလေး…… သဘောကျလို့ သိမ်းထားရင်း အမှတ်တမဲ့ ပြန်တွေ့တာ …. ကောင်လေး လက်ကို ဆွဲပြီး ခုန်ကူးနေတဲ့ မိန်းမငယ်လေးရဲ့ မျက်နာမှာ ယုံကြည်ခြင်းတွေ ,ချစ်ခြင်းတွေ , ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ရှိတယ် …… ဘေးက မြင်တဲ့သူတွေက ပြုတ်ကျမလား စိုးရိမ်ကြတယ် …… ငါသာဆို မကူးရဲဘူး ပြောချင် ပြောကြမယ် …. ဒါပေမဲ့ ဒီမိန်းကလေးကတော့ သူ့ချစ်သူကို ယုံကြည် အားကိုးစိတ်တွေနဲ့ သတ္တိအပြည့် ရှိနေပုံပါပဲ ……. ထွက်ခါနီး သဘ်ောပေါ် သတ္တိအပြည့်နဲ့ ခုန်ကူးတဲ့ အကြောင်းကတော့ စာမဖွဲ့ပါဘူး ….. … Read more
လူအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့ အထဲမှာ တချို့က ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ဖော်ပြောနိုင်ပေမယ့် တချို့တွေ ကျတော့ ကိုယ့်စိတ် ခံစားချက်တွေကို ပါးစပ်က ထုတ်မပြောဘဲ အပြုအမူလေးတွေက တဆင့် ဖော်ပြတတ် ကြပါ တယ် ။ သင့်ကို သတိရတယ်၊ လွမ်းတယ်ဆိုပြီး ပါးစပ်ကတဖွဖွထုတ်မပြောတတ်တဲ့ချစ်သူရှိရင် သူသင့်ကိုလွမ်းနေတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင် ပါတယ် ။ (၁) အဆက်အသွယ် သင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ စကားကြာကြာပြောဖို့ ကြိုးစား တတ်တယ်။ သူပြောတဲ့စကားထဲမှာ သတိရတဲ့အကြောင်း၊ လွမ်းတဲ့အကြောင်း မပါပေမယ့် ဒီလို စကားကြာကြာပြော ဖို့ကြိုးစားတာကပဲ သင့်ကို လွမ်းနေတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ ။ (၂) မက်ဆေ့လေးတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ သင်တင်ထားတဲ့ပို့စ်အောက်မှာ ကွန်မန့်လေးတွေ၊ မက်ဆေ့လေးတွေချန်ထားတတ်တယ်။ ဒါကလည်း သင့်ကိုလွမ်းနေတဲ့ … Read more
← Previous Page1 … Page455 Page456 Page457 … Page488 Next →